Ahoana no hahatongavana ho mpitarika eritreritra: Dingana 11 - Ne gerekir?
Ahoana no hahatongavana ho mpitarika eritreritra: Dingana 11
Inona no atao hoe mpitarika eritreritra, ahoana no hahatongavana ho mpitarika eritreritra, inona no ataon'ny mpitarika eritreritra
Mitombo ny filana fitarihana eritreritra rehefa mandeha ny fotoana. Na inona na inona fahaiza-manaonao, dia zava-dehibe ny mahazo fanampiana avy amin'ny maso ivelany, manam-pahaizana manokana izay manana rafi-pisainana tsy dia mahasosotra kokoa noho ny anao amin'izao fotoana izao.
Lohahevitra manan-danja ao amin'ny lahatsoratra
Ny dikan'ny hoe fitarihana fisainana
Karazana fitarihana eritreritra
Dingana ho lasa mpitarika eritreritra
Loharanom-bola ho an'ny mpitarika eritreritra
Soso-kevitra sy fampitandremana
Ny mpitarika eritreritra dia olona manana hevitra na eritreritra mendrika hozaraina.
Manao ahoana aho?
Manana karazana fampahalalana rehetra momba ny faritra misy anao.
Mamolavola sy mizara hevitra sarobidy.
Ampitomboy ny mpihaino anao.
Mpitarika fisainana: olona na fikambanana izay tadiavin'ny hafa eo amin'ny sehatra misy azy mba hahazoana fahaiza-manao, fitarihana ary torohevitra.
Inona no atao hoe eritreritra leadership?
Ny teny hoe mpitarika eritreritra dia avy amin'ny hevitra hoe mitarika eritreritra amin'ny faritra iray ireo olona ireo. Ny mpitarika eritreritra dia olona manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatra misy azy ary afaka manentana ny hafa.
Izy io dia teknika ara-barotra stratejika izay mitarika amin'ny fitomboan'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny fanomezana fampahalalana sarobidy ho an'ny fikambanana izay afaka manampy azy ireo hahatakatra bebe kokoa ny filany sy ny faniriany. Fomba mahomby ho an'ny orinasa hananganana ny lazany amin'ny alàlan'ny media sosialy ihany koa izany. Saingy ny fitarihana eritreritra dia mitaky ny fampiasam-bola ny fotoana sy ny loharano ilaina amin'ny famoronana hevitra sy famoronana votoaty. Izany ihany no mety ho fanamby ho an'ny orinasa madinika sy fanombohana.
Nilaza izahay fa manana fahaiza-manao lalina amin'ny sehatra misy azy ny mpitarika eritreritra. Saingy tianay ny hampahafantatra anao ny mpitarika eritreritra iray izay namolavola ny paikadiny manokana hifanaraka amin'ny indostria rehetra. Ny resadresakay tamin'i Maurits van Sambeek avy any Holandy dia eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Nahoana no zava-dehibe ny manao raharaham-barotra amin'ireo mpitarika eritreritra?
Tetikady manan-danja ho an'ny marika ny fitarihana fisainana. Manorina laza eo amin'ny indostria izany ary manangana fahatokisana ao an-tsain'ny mpanjifa. Ny fitarihana fisainana dia fomba iray hananganana fifandraisana amin'ireo mpikatroka ary dingana iray manan-danja amin'ny fananganana tetezana matanjaka.
1) Marketing votoaty
Ny marketing votoaty dia fotoana iray hamoronana votoaty sarobidy izay mampifandray ny olona amin'ny marika, mamorona mpitarika eritreritra ao amin'ny indostria ary mandrisika azy ireo handray andraikitra.
Ny mety ho fahombiazana amin'ny marketing influencer dia avy amin'ny fampiasana tambajotra media sosialy amin'ny fifandraisana amin'ny olona manana mpanaraka be dia be, fifandraisana matanjaka ary fahaizana mamindra tsena.
3) Famoahana orinasa
Ny ekipan'ny orinasa mpamoaka lahatsoratra dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana sy fizarana votoaty ho an'ny mpiasa sy mpanjifan'ny orinasa iray. Ity ekipa ity dia miara-miasa amin'ny ekipan'ny varotra, ny serasera, ny fanofanana, ary ny ekipan'ny Fifandraisana amin'ny mpiasa mba hamoronana votoaty mahasoa ho an'ny mpihaino kendrena amin'ny orinasa.
Ahoana no hahatonga ahy ho mpitarika eritreritra?
Miomàna hamaly ireo fanontaniana apetraka matetika indrindra momba ny indostrianao mba hametrahana ny tenanao ho mpitarika eritreritra. Ny fitarihana fisainana dia manome hevitra mahasoa izay afaka manetsika ny olona amin'ny lalana samihafa. Ny tanjona dia ny hanana eritreritra mila fiheverana, manolotra fitarihana sy mazava, ankoatra ny zavatra hafa.
Mitaky karazana metafizika sy fahendrena ny fitarihana. Ny fitarihana dia tsy vitan'ny hoe manao zavatra avy amin'ny tsy misy, fa manararaotra ny zavatra efa ananantsika.
Ny metafizika dia ny fandalinana ny singa fototra amin'ny zava-misy, ny toetran'ny fotoana, ny habaka, ny antony ary ny maha-izy azy.
Ny fahendrena dia ny fahalalana azonao rehefa mandeha ny fotoana ary azo ampiasaina hitarihana ny asanao.
Ny olon-kendry, tsy mitovy amin’ny mpahay siansa, dia olona mahafantatra avy amin’ny zavatra niainany ny tsara sy ny tsara. Ny fahendrena dia toetra ananan’ireo izay miaina elaela mba hianatra amin’ny alalan’ny fitsapana sy ny fahadisoana izay tokony hatao amin’ny toe-javatra samihafa.
Mieritrereta lalina sy mitsikera
Ny mpitarika dia tsy maintsy mieritreritra lalina sy mitsikera ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao ary miezaka ny hahatakatra izany. Alohan'ny handraisana fepetra na fandraisana andraikitra dia tsy maintsy mieritreritra tsara ny mpitondra ary mandinika izay mety ho vokatry ny fanapahan-keviny amin'ny tenany sy ny manodidina azy. Ny mpitarika dia tsy maintsy miaiky ihany koa fa tsy afaka ny hanaratsy ny hafa izy ary hitady fahafahana hianatra avy amin'izy ireo fa tsy hametraka ny fomba fijeriny manokana amin'izy ireo.
Raha te ho mpitarika eritreritra ianao dia tsy maintsy mametraka ny marika manokana anao aloha. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana lahatsoratra ao amin'ny blôginao na tranokalan'ny antoko fahatelo.
Mba ho hita ho toy ny feo manam-pahefana, mila mifantoka amin'ny kalitao ianao fa tsy ny habetsahana. Midika izany fa manome hevi-baovao avo lenta, fa tsy manampy lahatsoratra betsaka araka izay azo atao raha tsy misy fahalalahana marina.
Hazavao ny faritra misy anao ary mifikira amin'izany
Tokony ho fantatrao ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra.
Ny mpitarika eritreritra dia tsy maintsy manana ny karazana fahalalana rehetra momba ny faritra misy azy. Noho ny maha-olombelona dia tsy afaka mahazo ny fampahalalana rehetra momba ny lohahevitra rehetra isika; raha tsy hoe nanao paikady hafa isika.
Ny soso-kevitry ny manampahaizana: ny mpitarika eritreritra dia tokony handray anjara amin'ny fitarihana eritreritra ao amin'ny faritra misy azy.
Rehefa avy nilaza izany dia misy mpitarika eritreritra tiana hampahafantatra anao. Maurits van Sambeek, mipetraka any Holandy: ny fehin-keviny momba ny metafizika, ny fahendrena, ny filozofia ary ny maha-olombelona. izay afaka mifanaraka amin'ny indostria rehetra tetika fitarihana fisainana noforonina. Ny resadresakay tamin'i Sambeek malala dia eo amin'ny faran'ny lahatsoratra. Te hiresaka momba ny ohatra miavaka amin'ity lohahevitra ity izahay.
Inona no toetran'ny mpitondra eritreritra tsy refesi-mandidy sy mibaribary?
Manana fahalalana lalina momba ny indostria izy.
Mafy ny fifandraisan'izy ireo.
Mahasarika sy mahasoa ny atiny.
Misongadina amin’ny haino aman-jery izany.
Inona no tokony hataoko tsikelikely mba ho lasa mpitarika eritreritra?
Manaova fikarohana betsaka araka izay azonao atao mba hiomanana mandrakariva amin’ireo fanontaniana mety ho avy amin’ny mpihaino anao sy ny toe-javatra mety ho tojo anao; manana fahalalana sy traikefa.
Mamorona tranokalanao manokana, mamorona bilaogy eto.
Mamokatra votoaty miavaka sy tsara ary mahasoa.
Lasa mpanoratra vahiny ho an'ny tranokala manao raharaham-barotra mifandraika amin'ny indostrianao.
Mazotoa amin'ny media sosialy sy ny bilaoginao.
Vahiny ihany koa amin'ny tafatafa, podcast, horonan-tsary na seho vaovao.
Asehoy ny lahateninao sy ny famelabelaranao amin'ny alàlan'ny lahateny fototra, talk show.
Amboary ny marika sy ny indostrianao ary apetraho ny fahefanao.
Mihaona sy mifandray amin'ireo mpitarika eritreritra ao amin'ny indostrianao.
Tandremo ny fampitandremana ao amin'ny fizarana "Fampitandremana" etsy ambany.
Ahoana no tokony hiheveran'ny mpitarika amin'ny varotra?
Mifantoha amin'ny filan'ny mpihaino anao sy ny ahiahiny.
Manana fomba fijery hafa foana miaraka aminao.
Aoka ho marina sy tso-po.
Mahazo fitokisana, ataovy azo antoka.
Raiso ho "olon-tokana" ny mpihaino anao, fa tsy ho toy ny fiaraha-monina.
Amin'ny maha-mpitarika eritreritra anao dia afaka mahazo fidiram-bola sy tombontsoa avy amin'ny:
Mitadiava asa mora amin'ny indostrianao
Ny maha-mpanentana anao amin'ny zavatra atolotrao amin'ny mpiara-miasa aminao amin'ny indostrianao
Mahazo vola avy amin'ny tranokalanao, media sosialy, toerana vahiny
Mahazo vola amin'ny bokiny
Hevitra fitarihana hamokatra vahaolana indray mandeha; Tsy ny fitadiavana hevitra mahasoa akory. Ilaina ny ezaka maharitra mba hisian'ny fizotry ny fitarihana tsy tapaka.
Tokony hanao fikarohana be dia be ianao mba hahafahanao miomana amin'ny toe-javatra sy fanontaniana rehetra. Mahasoa anao ny mahafantatra ny olana eo amin'ny indostrianao sy mamolavola hevitra mialoha. Izany no antony tokony hihainoanao foana ny mpihaino anao.
Fantaro ny hevitry ny mpifaninana aminao sy ny mpiara-miasa aminao. Vakio ny lahatsoratra rehetra mifandraika amin'ny indostrianao.
Tsy voatery hitovy amin'ny lahy sy vavy manokana ny mpitarika eritreritra.
Mifantoha kosa amin'ny zavatra ilain'ny mpihaino anao. Na dia mety manana vokatra na serivisy mamaha ny olan'izy ireo aza ianao, dia tsy ity no toerana atolotra azy.
Fadio ny mamerina ny rehetra. Tadiavo kosa ny fomba fijery hafa momba ny toe-javatra ary zarao izany. Mitadiava fomba hiavaka amin'ireo mpandinika hafa ao amin'ny orinasanao.
Mba hisorohana ny tsy fitoviana amin'ny voalohany dia azonao atao ny mangataka olona iray hanara-maso ny ezaka ataonao amin'ny fitarihana.
Tsy ny hevitra rehetra no hahomby. Tsy afaka ny ho tonga lafatra ianao. Mivoaha ary mivonona amin'izany; ary apetraho amin'ny mpihaino anao izany.
Raiso ny hevitra; ho lohahevitra; Fadio ny manao asa tsotra noho ny votoatiny.
Tokony ho vonona amin'ny fanontaniana rehetra mety ho avy amin'ny mpihaino anao ianao ary amin'ny toe-javatra rehetra ho hitanao amin'ny olona na andrim-panjakana izay ho mpitarika eritreritrao.
Mpanolotsaina maneran-tany State Street
Resadresaka momba ny Leadership Thought
Resadresaka nifanaovana tamin'i Maurits van Sambeek
➜ Rariny ve ny fitarihana sa azo ianarana?
➜ faritra mampionona
➜ Tanjona sy fanadiovana ny saina
Aza matahotra fitsikerana! Manontany ianao hoe maninona?
Ny lojikan'ny tsy fahatahorana fitsikerana dia nohazavaina tao amin'ny lahatsoratray. Main;
Iza no mitsikera?
Iza no tsy tokony hitsikera
Iza no tokony hitsikera
Ahoana no hanafoanana ny fitsarana an-tendrony? Inona no simba?
Ny lahatsoratray dia manazava ny fomba ahafahantsika manafoana ny fitsarana an-tendrony. Main;
Ahoana no hamongorako azy?
Rumi sy Yunus
Sehatra fampahalalana goavambe